Baaskiil koronto oo waddo cusub maraya A6-R oo leh taayirro 700 * 35C | ebike Shuangye
Bogga ugu weyn Products Baaskiilada korantada ugu fiican Baaskiil koronto oo waddo cusub maraya A6-R oo leh taayirro 700 * 35C ah
Mashiinka: 36V 250W qalab-la'aan-la'aan
Xawaaraha ugu sarreeya: 25 km / h
Batariga: 36V 8AH / 10AH batari lithium
Range: 1: 1 PAS qaab, 40-60KM
Dammaanad: 12 bilood (Motor & Battery)
Hawlaha bilaabista: PAS iyo gawaarida
Xeedho: 42V 2A 100-240V talooyin CE / UL Certification
Wakhtiga lacag bixinta: Saacadaha 4-6
Cable: Sii deyn deg deg ah & biyo la'aan
Maamusha: 36V Intelligent burush
Details Product off faahfaahinta baaskiil koronto
Shuangye cusub ee ugu casrisan baaskiilka korantada wadada waa inaad wax ka barataa:
Midka hore waa wadada mootada korontada ka baxsan. Qaabka guud waa ka dheer yahay. Marka loo barbardhigo jirkii hore,
dhererka jirka ee la casriyeeyay wuxuu aad ugu habboon yahay joogga dadka gudaha
Yurub iyo Ameerika, iyo khibradda fuulitaanka ayaa noqon doonta mid raaxo leh.
Midda labaadna waa casriyaynta batteriga gudihiisa ka baxsan baaskiilada korontada jir. The
Unugga baytariga waxaa ku xirnaan doona tuubo aan biyuhu xirin, taas oo xallinaysa
dhibaatada burburka batteriga ee ay sababaan baaskiilada wadada si fudud biyaha u galaan. Waxaana jiri doona dalool qarsoon gaariga hortiisa, kaas oo batteriga si fudud loogala bixi karo.
Midda saddexaadna waa ka baxsan baaskiilada korontadataayirada. Taayirada ayaa isticmaali doona 700 * 35C oo xasiloon, oo qaadi kara wax badan
culeyska, wuxuuna xaliyaa dhibaatada mootooyinka wadada ee fudud in wax la dalooliyo
maxaa yeelay taayirrada ayaa aad u dhuuban.
Kan afraadna waa intaas oo dhanka baxsan baaskiilada korontada waxay qaadataa wareeg deg deg ah oo biyuhu sii daayaan, kaas oo ku fududaanaya dayactirka mustaqbalka.
ka baxsan baaskiilada korontada motor
36V 250W / 350W xarunta mashiinka aan burushka lahayn, xawaaraha ugu badan ee 25 illaa 30KM / H. Mootada gadaal waxay bixisaa awood dheeri ah iyo waxqabad wanaagsan. Baaskiiladaha korantada ee korontada waxay isticmaalaan mootada gadaal-gadaal, taas oo ka ammaan iyo waxtar badan taayirka-hore. The
80% heerka beddelka mootada ayaa si wax ku ool ah ugu beddeli kara tamarta korantada
tamar farsamo si loogu helo awood loogu talagalay baaskiilada korantada. Waxa intaa ka sii mudan in la xuso waa buuq yar, oo u hooseeya 60 dB, oo bixiya khibrad raaxo leh oo dhawaq yar.
ka baxsan batteriga baaskiilka korantada
Batroolka lithium 36V 8AH / 10AH waa bilaa biyo, wuxuu u dhexeeyaa 40-60KM oo lacag ah, iyo waqtiga lacag bixinta oo ah 4-6 saacadood saacaddii. Batarigu wuxuu leeyahay laba qeexitaan, waxaana jira heerar kala duwan oo kartiyeed sida ay qabaan baytariyada kaladuwan. Mid ka mid ah
waa heerka caadiga ah ee batteriga 36V 8AH, tan kalena waa tan
cusbooneysiiyay nooca 36V 10AH (unug batari LG) awood batteri. Haddii aad leedahay shuruudo badan oo masaafada ah, markaa 36V 10AH ayaa laga yaabaa inay noqoto xulashadaada ugu fiican. Xadkayaga safarka / lacag bixinta waxay gaari karaan 40-60 kiiloomitir.
ka baxsan baaskiilada korontada bandhigay LCD
Muuqaalkan LCD-ka ee aan biyuhu iyo lugaha lahayn, oo muujinaya xawaare, awood, heerkul, kala duwanaan, iyo wixii la mid ah… Sidoo kale, waad hagaajin kartaa heerka PAS (laga bilaabo 0-5), heerka sare ee aad hagaajinayso, xawaaraha degdegga ah ee aad heli doonto, iyo isticmaal tamar yar. Bandhigga LCD-ku waa biyo-la'aan, waxaad ku raaci kartaa baaskiilka elektaroonigga ah maalin roob leh dhib la'aan.
ka baxsan baaskiilada korontada fiilooyinka biyuhu xireen ee aan biyuhu karin & deg deg
Baaskiilada korantada waddo oo dhan waxay korsataa fiilo dhaqso u sii deysa oo biyuhu xiraan, taas oo sahleysa dayactirka mustaqbalka. Cusboonaysiintaani waxay hagaajineysaa dhibaatada ah in baaskiiladaha korantada ee korontada ay u nugul yihiin waxyeelada biyaha ee wareegga. Xitaa haddii aad adigu sameysid naftaada, si fudud ayaad u ilaalin kartaa.
Haddaad daneynaysid annaga Baaskiil koronto oo waddo cusub maraya A6-R oo leh taayirro 700 * 35C ah , fadlan farriintaada uga tag sida hoos ku qoran, waan kula soo xiriiri doonnaa sida ugu dhakhsaha badan. Ama waad soo booqan kartaa bogga rasmiga ah: www.zhsydz.com
Tags:baaskiilka wadada ka baxsan baaskiilada korontada koronto baaskiilka ugu fiican baaskiilada korontada
Ka hor: 27.5 ″ dhexda wadista ebike 350w bafang motor A6AH26MD
Next: mootada korontada baaskiilka wasakhda 26 ″*4.0 taayir baruur 48V 500W 750W D1